Fanavaozana avy ao Ogandà: resaka fandriampahalemana, fampihavanana, ary filoha tezitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Aogositra 2018 18:19 GMT
Herinandro mahafinaritra ho an'ireo vaovao lehibe sy fanoratana matsilo tao Oganda ity. Manohy manjaka amin'ny fandaharampotoana ny resaka fandriampahalemana ao Juba . Tamin'ny herinandro lasa teo, nitondra ireo mpikomy avy tao amin'ny LRA hivory tamin'ny voalohan'ny volana Desambra ho ao amin'ireo toerana roa fivoriana ao atsimon'i Sodàna ilay fanavaozana indray ny fampitsaharana fifampitifirana. Nitarika ny resaka ny fanjakana, matoky foana ny fahombiazan'ireo resaka ireo, Atoa. Rugunda ny Minisitry ny Raharahana Anatiny, ary ho fanohanana ireo fifampiraharahana dia saika nampanantena fanampiana ara-bola avokoa ireo mpanolo-tànana voalohany indrindra.
Iray tamin'ireo malala-tànana tsy tonga tao i Etazonia. Manontany ny antony ny Uganda-CAN:
Raha amin'izao zava-misy izao, tsy misy azontsika atao afatsy ny mieritreritra ny tombontsoan'ny fitondran'i Bush izay miasa saina amin'nhy handratra na ho very zavatra raha toa ka mampiseho ny fanohanany ity hetsika santatra manan-tantara ho amin'ny fandirampahalemana izy. Mampanahy azy ve ny hoe mety hanaratsy ny fifandraisany amin'ny Filoha Museveni, izay efa nàmany ara-tetika tao anatin'ny ady amin'ny fampihorohoroana izany? Miahiahy ve izy sao mety hanaratsy ny fifandraisana amin'izao fotoana izao misy eo amin'ny UPDF sy ny Vondron-Tafika Amerikana Mitampiadiana Miasa ao amin'ny Tandrok'i Afrika (CJTF-HOA) izany? Miahiahy ve izy sao mety ho very ny tobin'ny tafika an'habakabaka ao amin'ny Seranam-piaramanidina Entebbe? Miahiahy ve izy sao mety hanaratsy ny varotana fitaovampiadiana ataon'ny vahiny ao Oganda ve izany? Miahiahy ve izy sao mety hanohintohina ny tombontsoany ara-barotra ao amin'ny firenena ao anatin'ny fotoana izay hitomboan'ny dindon'i Shina ao amin'ny kaontinanta ve izany ? Na inona na inona izany, hita fa toa mametraka ny tombontsoa ara-jeopolitikany ho lohalaharana ny Trano Fotsy mialohan'ny tombontsoan'ireo Ogandey tandrefana taorian'ny ady nahery vaika nandritra ny 20 taona.
Mandritra izany fotoana izany, mitsikera mafy ny fikasan'ny Fanjakana tao amin'ilay resaka tao Juba i Ngromrom:
Amin'izao fotoana iresahako izao, raha toa ka tsy maintsy nanala ireo miaramilan'ny NRA tsy ho amin'ireo tobin-tafika rehetra ny governemantan'i Museveni, mamadika ny politikany manoloana ireo mponina any Atsinanana sy Andrefan'i Ogandà, mampiroborobo kaomity iray ho an'ny fampihavanana, mahazo ary hamoaka famatsiambola ho an'ny fanarenana ireo faritra andrefana sy atsinanana, mitazona ny fitandroana ny filaminana manoloana ny polisy, mirotsaka anaty fandaharanasa mikendry ny hampizaka tena ireo mponina any amin'ny vondrom-piarahamonina rehetra, ho lasa betsaka loatra mihoatra noho izay ilaina ny resaka ho an'ny fandriampahalemana ao Juba. Hiteraka fiverenana haingana amin'ny zava-misy ara-dalàna ao Ogandà ireo teboka vitsivitsy ireo. Tsy i Juba irery ihany no toerana hanaovan'ireo Ogandey drafitra aorian'ilay ady.
Tao anatina hetsika iray niteraka adihevitra, nanambara ny fanjakana fa hanakatona ny tobin'ny IDP (tobin'ireo olona nafindra toerana ao anatin'ny fireneny ihany) alohan'ny faran'ny taona. Raha toa ka maro ireo nankasitraka ny hetsiky ny fanjakana tamin'ny fandraisana amin'ny fomba matotra ny fampivoarana ny Andrefana taorian'ny fifandonana, mino kosa ireo mpitsikera, ao anatin'izany i Jackfruity, fa tena lasa aloha loatra sy mampididoza ilay hetsika:
Fomba mitera-doza ahiana hanaratsy kokoa ny fiainan'ireo olona an-tapitrisany izay voakasik'ilay fifandirana ny fanakantonana mampitolagaga nataon'ny fanjakana an'ireo tobin'ny IDP ho porofo fa hoe efa milamina ny faritra Andrefan'i Ogandà. Na efa nihena be aza ny fanafihana LRA nanomboka tamin'ny fiandohan'ilay resaka momba ny fandriampahalemana tao Juba, mila mametraka rafitra tsaratsara kokoa ho fandraisana azy ireny mialohan'ny fanerena ireo IDP hiverina.
Any Atsimo kokoa, ao amin'ilay tanàna mamovoka ao Kasana, Distrikan'i Luwero, mitatitra momba ilay fivoriana kely tsy dia voamarika izay mety ho dingana voalohany mankany amin'ny famoronana kolontsaina Ogandey amin'ny resaka fampihavanana ny In An African Minute:
Tamin'ny Alarobia, 11 Oktobra 2006, lohateny tsy nampino no navoakan'ny The Daily Monitor: ‘Mitady Fifanatonana Amin'i Luwero ny Avaratra’. Manohy amin'ny famaritana fihaonana teo amin'ireo mpitarika ara-kolontsaina, Fikambanana Tsy Miankina ary mpitondra politika avy ao amin'ny faritra lehibe ao avaratra sy ny mitovy amin'izy ireo avy ao Luwero (afovoan'i Oganda) ilay lahatsoratra (tsy afaka jerena amin'ny aterineto), nosoratan'i Rogers Mulindwa. Nangataka famindrampo noho ireo heloka nataon'ny fitondran'i Oboto tamin'ny vahoaka tao Luwero tany amin'ny taona 1980 tany ireo mpitondra avy any avaratra. Mba hahazoana kokoa ny dikan'ity fivoriana ity, mila mahatakatra hoe ho an'ny Ogandey maro, manamarika ny fizarazaràna lalina sy mifampidipiditra nisy tao amin'ny faritra, foko sy vondrona ara-poko maro tao Oganda ny fandripahana tao Luwero. Matetika, voafatotry ny fahatsiarovana rà ireny fizarazaràna ireny.
Mpikambana efa ela tao amin'ny gazety Ogandey, fa zazavao ao amin'ny tontolon'ny blaogy. Manoratra amin'ny fomba lalina mikasika ny lova navelan'ilay filoha niasa mafy i Angelo Izama, ao amin'ny Sub-Saharan African Round Table (Reska an-databatr'ireo Afrikana ao Atsimon'i Saharà):
Sady mpanoratra ihany ny tenany, afaka mitambatra i Museveni sy ilay mpitsikera Kalyegira ary manoratra boky mitondra ny lohateny hoe ”Nofy taloha: avy amin'ny Tany Andalampandrosoana mankany amin'ny Tany Andalampandrosoana”, ny mombamomba an'ilay filoha Ogandey sosotra. Tsy miorina ambonin'ny politika ara-toeaena ratsy, adim-poko sy tontolo ara-barotra manerana ny tany izay manilikilika irery ihany ny fitokozihirana ao Oganda fa ambonin'ny krizina fihetsika mahaondrakondrafana ihany koa. Raha toa ny mpanoratra toa an'i Kalyegira ka malahelo ny hoe tsy dia manan-danja loatra ny Afrikana, tsy dia miasa ho an'ny fivelaran'ny safidy ao Afrika izy sy ireo hafa sasany. Tsy izany, misy fihemorana eo amin'ny kantony mankamin'ny fandaniana andro afrikana iray hafa izay tiana kokoa, ny tempoly tsy tantera-pahazavàna an'ny finoana sy ireo angano toy ny fahambonian'ny fotsy.